Google Play Store မှာ This item is not available in your country ပြသနာကို ဖြေရှင်းကြမယ် • TECH CORNER
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ … ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်း အသုံးပြုသူတိုင်း ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိတဲ့ ပြသနာလေး တစ်ခုရဲ့ ဖြေရှင်းပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ Application တစ်ခုကို Google Play Store မှာ သွားရှာတယ် ရှာလို့ မတွေ့ဘူး ဒါနဲ့ပဲ Google Chrome ကို ဖွင့် Google က‌နေ လိုချင်တဲ့ Application နာမည်ကို ရိုက်ရှာကြတယ်ပေါ့ဗျာ။
အဲ့လိုရှာလိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ Application က search results ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ တန်းတွေ့တာနဲ့ နှိပ်ထည့်လိုက်တော့ Google Play Store ထဲကို ရောက်သွားပါလေရော။ အဲ့မှာ ‘This item is not available in your country’ ဆိုတဲ့ စာကိုပဲ တွေ့ရပြီး Download လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ပြသနာက ကျွန်တော်တို့ Download လုပ်ချင်တဲ့ Application က ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ (မြန်မာနိုင်ငံ) region ရဲ့ Google Play Store မှာ ရှိမနေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Spotify ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို support ပေးမထားတဲ့အတွက် Google Play မှာ မရှိတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အရင်တုန်းကတော့ ဒီပြသနာကို VPN နဲ့ region ကျော်ပြီး Download လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်း VPN Application မျိုးစုံနဲ့ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပေမဲ့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။
ဆိုတော့ နောက်တစ်နည်းက Play Store မှာ လိုချင်တဲ့ App မရှိရင် Unofficial Stores တွေ ဖြစ်တဲ့ ဥပမာ APK Pure လို Application တွေကနေ Download လုပ်ကြပါတယ်။ APK Pure မှာတော့ Application စုံစုံလင်လင်ရှိပေမဲ့ အဆင်မပြေမှူတစ်ချို့ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကြော်ငြာတွေလဲပါသလို Third-party store ဖြစ်တဲ့အတွက် virus တွေရဲ့ အန္တရယ်လဲ ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော် Plants and Zombies2ဆိုတဲ့ game လေး တစ်ခု ဆော့ဖို့ Google Play Store မှာ မရှိတာနဲ့ APK Pure, APK Mirror စတဲ့ Third-party stores တွေက‌နေ စုံအောင် စမ်းပြီး ဒေါင်းကြည့်ပါတယ်။ Download လုပ်လို့တော့ ရပေမဲ့ game ကို ဖွင့်တဲ့အခါ ‘You may not have purchased this app’ ဆိုတဲ့ error မျိုးနဲ့ ကြုံပြီး ‌ဆော့လို့မရပါ။ ဒီတော့ VPN ကျော်တဲ့နည်းလဲမရတော့ဘူးဆိုတော့ Google Play Store ကနေ တရားဝင် Application တွေ ‌Download လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းကိုပဲ ကျွန်တော်ရှာတွေ့ထားတာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဒီနည်းကို သိပြီးတဲ့သူတွေ ရှိနိုင်သလို တခြားအဆင်ပြေတဲ့ နည်းတွေ ရှိရင် ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ Account နှစ်ခုရှိရင် VPN နဲ့ switch လုပ်တာမျိုးလုပ်လို့ရပေမဲ့ Download လုပ်ချင်တဲ့ အချိန်တိုင်း VPN သုံးနေရသလို VPN ကြောင့် Download Speed ကျတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။ အခုဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းကအဆင့်တွေနည်းနည်း ရှုပ်နေနိုင်ပေမဲ့ ပြီးသွားရင် ဘာ VPN မှ မလို၊ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲ ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲ့ Application ကို Download လုပ်လို့ရပါတယ်။ United States Account တစ်ခု ရအောင် ဖွင့်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ … စလိုက်ရအောင်ဗျာ။ ။
ပထမဆုံး Google account အသစ်တစ်ခုဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ setting ထဲက account ဆိုတဲ့အထဲကို သွားပါ။ ပြီးရင် Add account ကနေ Google account အသစ်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ (Google account ဖွင့်ဖို့ ပေါ်လာတဲ့ Steps လေးတွေအတိုင်း လုပ်သွားရုံပါပဲ။ Google account ဖွင့်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ်တော့ တောင်းပါလိမ့်မယ်။ အရင် ဖွင့်ထားပြီးသား ဖုန်းနံပါတ်ဆိုလဲ ရပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ဖုန်းထဲကနေပဲ ဖွင့်ပါ။ Browser ကနေ မဖွင့်ပါနဲ့။ အောက်မှာ ပုံလေးတွေ ပြထားပါတယ်။)
Account ဖွင့်တာ အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်အတွက် VPN လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Turbo VPN ကို သုံးပါတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ VPN မရှိရင် Turbo VPN ကို ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီး Down ပါ။ ပြီးရင် အောက်က ပုံထဲကအတိုင်း ညာဘက်အပေါ်ထောင့်က ကမ္ဘာလံုးပံု‌ေလးကို နှိပ်ပြီး United States ကို ချိတ်ပါမယ်။
ဖြည့်စွက်။ ။ ဒီ Article က မနှစ်က Facebook ကို VPN မလိုပဲ သုံးလို့ရနေချိန်မှာ ရေးခဲ့တာပါ။ အခုတော့ လူတိုင်းလိုလို VPN သုံးတတ်‌‌နေပါပြီ။ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ Turbo VPN မဟုတ်ပဲ US region ကို ရွေးလို့ ရတဲ့ VPN သုံးရင်လဲ ရပါတယ်။
VPN အောင်အောင်မြင်မြင် ချိတ်ပြီးသွားရင်တော့ Google Play Application ကို ဖွင့်ပြီး ညာဘက်အပေါ်ထောင့်က လက်ရှိကိုယ်သုံး‌နေတဲ့ ကိုယ့်အကောင့်နာမည်တစ်လုံးတည်းပဲ ရှိတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ကပုံထဲကလို ကိုယ်သုံးနေတဲ့ လက်ရှိ Account ရယ်၊ အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ account ရယ်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အကောင့်သစ်ကို နှိပ်ပြီး ဝင်လိုက်ပါ။ Terms of services ဆိုပြီး Accept နှိပ်‌ပေးရပါမယ်။
(ဒီနေရာမှာ တချို့က အဝိုင်းလည်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ကျရင် ပြန်ထွက်ပြီး Google Play Store Application ကို Recents ကနေ Clear လုပ်ပြီး ပြန်ဝင်ပါ။ Terms of services ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။)
Terms of services မှာ Accept နှိပ်ပြီးသွားရင် Google Play Store ရဲ့ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်က Hamburger Menu (မျဉ်းကြောင်းသုံးကြောင်း) ကို နှိပ်ပြီး Account ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ အဲ့နေရာမှာ Add credit or debit card ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်ပါ။ Visa ဒါမှမဟုတ် ကြိုက်တဲ့ Credit card ကို ရွေးပြီးဖြည့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ credit card အစစ်ထည့်နိုင်သလို fake card နံပါတ်ကို ဒီ website ကနေ သွားယူလို့ရပါတယ်။
ZIP Codes ကို အောက်ကပေးထားတဲ့ codes တွေ ကြိုက်ရာထည့်ပါ။
ပြီးရင် အဲ့ website က ရတဲ့ နံပါတ်ကို ဖြည့်၊ MM/YY (လ၊ နှစ်) နေရာမှာ ကြိုက်တာ‌ဖြည့်၊ နောက်က CVV နေရာမှာ လဲ ကြိုက်တဲ့ ဂဏန်း ၃ လုံး ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။ OK ပေးလိုက်ရင် Card က မှားနေတဲ့ အကြောင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ကျရင် Home ကို ပြန်ထွက်၊ Google Play Application ကို Clear လုပ်ပြီး ပြန်ဝင်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
အရင် Account နဲ့တုန်းက Download လုပ်မရခဲ့တဲ့ Plants and Zombies2လို Application မျိုးရှာကြည့်ပါ။ Install လို့ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ Install ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် Complete account setup ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Continue ပေးလိုက်ပါ။ Credit Card ထပ်ဖြည့်ခိုင်းရင် Skip ဆိုတာ ရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ install လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်က Hamburger Menu ကနေ Account ကို သွားကြည့်လိုက်ရင်လဲ ကိုယ့်အကောင့်က United States ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် အားလုံးပြီးဆုံးပါပြီ။ VPN လဲ ပြန်ပြီး Disconnect လို့ ရပါပြီ။
အရင်တုန်းက ကြုံခဲ့ရတဲ့ This item is not available in your country ဆိုတဲ့ Application မှန်သမျှ ကြိုက်သလို Download လုပ်လို့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Google Play Store ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့် Account နာမည်နေရာလေးကနေ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင့်ဟောင်း (Myanmar region) နဲ့ အခုလုပ်လိုက်တဲ့ Account သစ် (US Region) ကြိုက်သလို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ VPN မလိုတော့ပါ။ မြန်မာ Region မှာ မရှိတဲ့ Application တွေကို အကောင့်သစ်လေးနဲ့ US ပြောင်းပြီး သာသာယာယာ Google Play Store ကနေ တရားဝင် Download လုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Apk pure လဲ အားကိုးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ပြုလုပ်ရတဲ့ အဆင့်တွေ နည်းနည်းရှည်ပေမဲ့ သေချာလေး ဂရုစိုက်ပြီး ကြိုးစားလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ တိုင်ပတ်နေတဲ့ နေရာရှိရင် ကျွန်တော်တို့ Page Messenger ကို လာရောက် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျို့။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ Tutorial လေးကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် Like and Share ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဆင့် ကူးယူပြီး ပြန်လည်ဖော်ပြတာမျိုးတော့ မလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ‌ဒီလိုမျိုး Tutorial လေးနည်းတူ အခြားအကြောင်းအရာ တစ်ခုခု သိချင်တာမျိုးရှိရင်လဲ comment မှာ ဖော်ပြပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရှာဖွေ ရေးသားပေးသွားမှာပါ။
This Article is owned by Tech Corner | No one is allowed to copy this Article, but you are feel free to share and save.
ArticlesGoogle Play StoreHow-To
Post Views: 2,964 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ…ကျွန်တော်တို့ Page ရဲ့ အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်း တင်ဆက် ပေးသွားမဲ့ Tech
Mobile Phones တွေ အရမ်းပူလာရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ?
Post Views: 1,906 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ…ကျွန်တော်တို့ Page ရဲ့ အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်း တင်ဆက်ပေးသွားမဲ့ Tech Knowledge
iPhone တစ်လုံးကို ပြုလုပ်ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ? (16,997)